विज्ञापन खारेज गर्न नमान्ने लाई कारवाही गर्न सांसदको माग, लाखौं युवाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? « The News Nepal
विज्ञापन खारेज गर्न नमान्ने लाई कारवाही गर्न सांसदको माग, लाखौं युवाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । लामो समय देखि विवादमा पर्दै आएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवाद फेरि संसदमा प्रवेश गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कारवाही गर्न संसदमा आवाज उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव र उमारशंकर अरगरियाले संविधान विपरित अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । अरगरियाले संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने र संविधानविपरित अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई कारवाहीको घेरामा राख्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले रुलिङको माग समेत गर्न भ्याएका छन । उनले भने, ‘समानुपातिक समावेशीतालाई उल्लंघन गर्दै विज्ञापन प्रकाशित गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । लोकसेवाको विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन नमान्ने मन्त्रीलाई पनि कारवाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ ।’ अर्को तर्फ मन्त्री पण्डितले विज्ञापन कुनै हालतमा फिर्ता नुहने अठान राख्दै आउँनु भएको छ ।
सांसद अरगरियाले समावेशी सिद्धान्तविपरित आएको लोकसेवाको विज्ञापनले संघीयतामाथि सांघातिक हमला भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्का सांसद प्रदीप यादवले लालबाबुको नाम नलिइ जथाभावी अभिव्यक्ति दिने साइकलमन्त्रीलाई लगाम लगाउन माग गरेका हुन् ।
अहिले पनि विद्यार्थीहरु आवेदन दिइरहेका छन् । सर्वोच्व अदालतले तत्काललाई विज्ञापन रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै फैसला दिएपछि विज्ञापन नरोकिने भएको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ ।